Gbasara Anyị | Zhejiang Gogogo Mechanical & Electrical Co., Ltd.
Mechanical na electronic N'ezie
Emepụtara igwe eletriki mbụ na 1822 site n'aka Michael Faraday. Emepụtara moto ahụ naanị otu afọ mgbe Hans Christian Ørsted chọpụtara na mmụba nke ọkụ eletrik na-emepụta oghere magnet. Mkpụrụ moto mbu a bụ naanị waya nke etinyebere n'ime iko nke mercury na ndọta na ala. Mgbe waya ejikọtara na batrị, a kere oghere magnetik na mmekọrịta a na ndọta nke ndọta nyere mere ka waya ahụ gbanye.
Afọ iri ka nke ahụ gasịrị, e mepụtara igwe na-enye ọkụ eletrik mbụ, ọzọ site n’aka Michael Faraday. Igwe jenerato a nwere magnet na-agafe na eriri waya ma na-eweputa ugbua nke ejiri galvanomita tụọ. Nchọpụta Faraday na nnwale ya n'ime ọkụ eletrik bụ ihe ndabere nke ọtụtụ ụkpụrụ elektrọnik nke oge a mara taa.
Mmasị na electromechanics jupụtara na nyocha na nkwukọrịta ogologo oge. Ngbanwe ngwa ngwa nke Industrial Revolution na-ebute mkpa maka nkwukọrịta intracontinental, na-ekwe ka electromechanics banye na ọrụ ọha. Relays sitere na telegraphy dị ka ngwaọrụ electromechanical eji mee ihe iji weghachite akara telegraph. Mgbanwe Strowger, ihe ngbanwe Panel, na ngwaọrụ ndị yiri ya ka ejiri rụọ ọrụ na ekwentị izizi akpaaka akpaaka. E bu ụzọ gbanye ndị mmadụ na Crossbar na narị afọ nke iri abụọ na Sweden, United States, Canada, na Great Britain, ndị a gbasakwara ngwa ngwa n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa.
（ZHEJIANG GOGOGO MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD, dị ka onye nwere ahụmahụ na onye na-azụ ahịa moto, nfuli mmiri na ngwaahịa ndị ọzọ.
Mr.Weed Zeng bụ nchoputa, Ọ na-arụ ọrụ na uzo ato eletrik,otu adọ capacitor mmalite moto,Mmiri mgbapụta nke Centrigugal Pipeline, na Submersible nsị mgbapụta ụlọ ọrụ maka ihe karịrị afọ 20, na-eje ozi ọtụtụ narị ndị ahịa ma na-aghọta mkpa nke ndị ahịa dị iche iche.ghọta atụmatụ dị iche iche nke ngwaahịa.N'usoro ọrụ, ọ zutere ọtụtụ ndị ahịa, ụfọdụ ndị ahịa chọrọ naanị otu ngwaahịa. Ndị ahịa chọrọ ụdị ngwaahịa dị iche iche. Iji mezuo mkpa pụrụ iche dị iche iche, anyị amalitela ịnye ọtụtụ ngwaahịa. Nke a nwere ike inyere ndị ahịa aka ịchekwa ọtụtụ oge, ịzụta ọnụ ahịa na mbọ. .Na n'otu oge, ndị ahịa ẹkenam karia ma ndị ahịa anyị n'ihi na ha nwere afọ ojuju na ngwaahịa na ọrụ anyị.
Anyị brand "GOGOGO MOTORS", "EASTOP MOTOR" bụ nnọọ ama na ọtụtụ emepe ahịa, dị ka Egypt, Sudan, Iraq, Morocco, Bangladesh, Philippines, Viatnam, Thailand, Ghana, Ethiopia, Srilanka, Poland, Spain, Turkey, Mexico, USA, Costa Rica, Colombia,
Nigeria, Kenya, wdg karịrị mba iri atọ.
Anyị nọ na Zeguo abụọ, Wenling nke dị naanị awa 3 site na ọdụ ụgbọ mmiri Ningbo nke abụọ kachasị ukwuu nke China. Anyị nwere ụlọ ọrụ eletriki igwe eletriki nke onwe anyị, ụlọ ọrụ mgbapụta mmiri, na ụlọ ọrụ nhicha igwe dị elu. nwere ike inye OEM / ODM / OTM service.we na-enye ngwaahịa anyị na ITT, ATLAS, CNP, WORDWIDE, wdg ozugbo ma ọ bụ site na ndị ọrụ anyị. anyị na-ebupụ ngwaahịa anyị karịa 200, 000pcs kwa afọ.
Iji hụ na mma nke ngwaahịa anyị, anyị nwere usoro njikwa njikwa siri ike maka usoro ọ bụla site na nhọrọ akụrụngwa, nhazi akụkụ, akụkụ na-ezukọ, nnwale ọ bụla na packagings.achieve the ruru eru nke 100%, ahịa afọ ojuju ọnụego nke 98%.
Iji kwado ndị ahịa anyị ma gbasaa ahịa anyị, anyị nwere ike itinye akwụkwọ maka asambodo dị iche iche dịka CE, TUV, ETL, UL, COC, SONCAP, COCQ, SAS0, wdg.
Anyị ji ezi obi na-atụ anya isoro ndị ahịa anyị niile rụpụta ihe ịga nke ọma ma kesaa ihe nzuzo anyị nke ọma.
Ngwaahịa dị elu, Ọrụ magburu onwe ya, ego bara uru, nnyefe kwesịrị ekwesị
Nke a bụ ngwa anwansi maka ndị ahịa ọhụrụ anyị ka ha bụrụ ndị ahịa anyị ochie, yana ịchụso anyị.
Biko kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ.